Free Thinker: အီလက်ထရောနစ် လူ့အဖွဲ့အစည်း (2)
(၂) အီလက်ထရောနစ် ဘဏ်လုပ်ငန်း
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူ၊ လျှင်မြန်၊ ချောမွေ့ခြင်းသည်လည်း အကြောင်း တစ်ချက်ဖြစ်၏။ မြန်မာပြည်မှ စာဖတ်ပရိသတ်များ လေ့လာနိုင်ရန် စင်ကာပူမှ ဘဏ်လုပ်ငန်းအကြောင်း အနည်းငယ် ပြောပြပါမည်။
စင်ကာပူတွင် ဘဏ်ပေါင်းများစွာရှိသည့်အနက် DBS Bank (The Development Bank of Singapore Limited), POSB (Post Office Savings Bank), OCBC (Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd), UOB (United Overseas Bank Limited), Standard Chartered Bank, May Bank, HSBC Bank, CitiBank Singapore Limited စသည်တို့မှာ ထင်ရှားသည်။
ဘဏ်များ များပြီး အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်သဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများမှာလည်း အဆင်ပြေချောမွေ့တာ များပါသည်။ သို့သော် လူအလွန်များသည့်အခါတော့ တန်းစီ စောင့်ရတတ်၏။
ချစ်စရာကောင်းသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ Interbank GIRO (IBG) ဖြစ်၏။ မိမိက GIRO လျှောက်ထားလိုက်ပါက ကျသင့်သော အခကြေးငွေများကို ပေးချိန်တန်လျှင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်က မိမိဘဏ်စာရင်းမှ အလိုအလျှောက် ဖြတ်တောက် သွားပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ - အိမ်သုံး ရေဘိုး၊ မီးဘိုး၊ ဖုံးဘိုး၊ အင်တာနက်ဘိုး၊ အိမ်လခ၊ ကျောင်းလခ၊ အာမခံကြေး၊ ဟိုအသင်း၊ ဒီအသင်းနှစ်စဉ်ကြေး၊ ဘဏ်ချေးငွေ၊ စသည်တို့မှာ လစဉ်ပုံမှန်ပေးနေရသည်ဖြစ်ရာ လတိုင်းပေးရန်ဆိုသည်မှာ ဒုက္ခများလှ သည်။ ထို့ပြင် အလုပ်ကလည်း လုပ်နေရတာတဖက်ဆိုတော့ ထိုများပြားလှသော လစဉ်ကြေးများ ပေးဆောင်ရန် မေ့သွား နိုင်သည်။ ပိုက်ဆံပေးရမည့် နောက်ဆုံးရက်ထက် ကျော်လွန်သွားပါက နောက်ကျကြေး ပေးရနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ထိုဒုက္ခများမှ လွတ်ကင်းစေရန် အထက်ဖော်ပြပါ လစဉ်ပုံမှန်ပေးနေရသော အဖိုးအခများအတွက် မိမိဘဏ်စာရင်း ဖွင့်ထားရာ ဘဏ်တွင် GIRO လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ GIRO လျှောက်ခြင်း၊ မလိုတော့၍ ပယ်ဖျက်ခြင်းကိုလည်း အင်တာနက် ဘဏ်လုပ်ငန်းမှပင် လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဖြစ်၍ အလွန်အဆင်ပြေလှ၏။ ဘယ်မှ သွားစရာမလိုပဲ မိမိကွန်ပြူတာ နှင့်ပင် လုပ်ကိုင်နိုင်လေသည်။
ယခုတော့ ရေဘိုး၊ မီးဘိုး၊ အင်တာနက်နှင့် ဖုံးဘိုးစသည့် ငွေတောင်းခံလွှာများကို (စက္ကူချွေတာသည့်အနေနှင့်) စာရွက်နှင့် မပို့တော့ဘဲ အင်တာနက်တွင် မိမိဘာသာ account ၌ စစ်ဆေးနိုင်၊ download လုပ်နိုင်ပါသည်။ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း ပျောက် သွားမှာ စိုးရိမ်စရာမလို။ ကြိုက်သည့်အချိန် အင်တာနက်မှ download လုပ်နိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု သဘောကျစရာကောင်းသည်မှာ iBanking (Internet Banking System) ဖြစ်၏။ iBanking ရှိထားလျှင် ပေးစရာ၊ ရစရာ ရှိသည်များကို ကိုယ့်စားပွဲပေါ်မှ ထိုင်ရာမထ လုပ်နိုင်လေသည်။ ပြောရလျှင် ဘဏ်၌ လူကိုယ်တိုင်သွားပြီး လုပ်ရသော အလုပ်တော်တော်များများကို iBanking ဖြင့် လုပ်နိုင်၏။
iBanking ကိုလည်း online baking စနစ်မှ လျှောက်နိုင်သည်။ လျှောက်ပြီးပြီဆိုလျှင် သူတို့က လျှို့ဝှက်နံပါတ်အတွက် တိုကင် ကို သင့်အိမ်သို့ စာတိုက်မှ ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ မိမိငွေပေးငွေယူလုပ်လိုသော ဘဏ်စာရင်းများကို ထိုတိုကင်သုံးပြီး စာရင်း သွင်းထားနိုင်ပါသည်။
iBanking သုံး၍ ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းများ လုပ်သည့်အခါတွင် မိမိဘဏ်စာရင်းဖွင့်ထားသော ဘဏ်၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ တွင် မိမိ ID နှင့် password ဖြင့် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ ဤတွင် မိမိ၏ password ကို တစ်ယောက်ယောက်က ခိုးယူ ပြီး မိမိဘဏ်စာရင်းထဲရှိပိုက်ဆံများကို ခိုးမသွားနိုင်ပါသလော ဟု မေးစရာရှိ၏။ ယခင်ကတော့ ခိုးနိုင်ပါသည်။ ယခုမူ လျှို့ဝှက်နံပါတ် သိရုံမျှဖြင့် မရတော့ပါ။ မိမိဘဏ်စာရင်းထဲသို့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြင့်ဝင်လျှင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ ဆိုတာလောက်သာ ကြည့်လို့ရပါသည်။ ငွေလွှဲလိုသည့်အခါတွင်မူ တိုကင်မှပေးသော OTP (One Time Password) ဖြင့် ၀င်မှသာ ရပါသည်။
တိုကင်ကို နေရာတကာ ယူမသွားလိုသူများအတွက် OTP ကို တယ်လီဖုံး message ဖြင့် ပို့ပေးပါသည်။ ထို message မှာ ၃ မိနစ်သာခံပြီး ၃ မိနစ်ကျော်သွားသည်နှင့် ဆက်သုံးလို့မရတော့ပါ။ ထိုကဲ့သို့ ပတ်စ်ဝပ် နှစ်ဆင့်ခံထားသောစနစ်ကို2step authentification system ဟု ခေါ်ပါသည်။ မသမာသူများ အခြားသူ၏ ဘဏ်စာရင်းအတွင်းဝင်ကာ ငွေများကို လွှဲပြောင်း ရယူမည့် အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ထားခြင်း ဖြစ်၏။
ကွန်ပြူတာက စားပွဲရှိမှ၊ အင်တာနက်ရှိမှ အလုပ်ဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် လမ်းသွားနေရင်းရော လုပ်လို့မရဘူးလား။ လုပ်လို့ရပါသည်။ ၎င်းကို mobile banking (mBanking) ဟု ခေါ်သည်။ mBanking apps ကို မိမိဖုံးတွင် install လုပ်ထားပါက မိမိဘဏ်စာရင်းတွင် ငွေမည်မျှရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးဦးထံ ပိုက်ဆံပို့လိုလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးဦးက မိမိထံပိုက်ဆံပို့လိုက်တာ ရောက်မရောက်ကိုသော်လည်းကောင်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သို့သော် mBanking ကို အများပြည်သူသုံး 3G, 4G network များ၊ free wifi များတွင် မသုံးရန် အကြံပြုပါသည်။ ထို network များမှာ လူတိုင်းသုံးနိုင်သည်ဖြစ်၍ မိမိ ဘဏ်စာရင်းကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
အခြားတိုင်းပြည်များသို့ မိမိနိုင်ငံသုံးငွေ (Sing Dollar) ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားငွေ (US Dollar, Euro etc.) ဖြင့်ဖြစ်စေ လွှဲနိုင်၏။ ၎င်းကို TT (Telegraphic Transfer) ဟု ခေါ်သည်။ TT ကိုလည်း အင်တာနက်ဘဏ်စနစ်မှ လွှဲနိုင်သည်။ သို့သော် ပိုပြီး သေချာစေရန် TT တွင် အဆင့်ပိုများ၏။ တိုကင်ကို သုံးလေးကြိမ်နှိပ်ရသည်။
ထို့ကြောင့် ငွေသားဖြင့် အထုတ်အသွင်းလုပ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများတင်ခြင်း ကိစ္စများမှလွဲ၍ ဘဏ်သို့ သွားစရာမလိုဘဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်နိုင်လေသည်။
ဘဏ်များကလည်း ချေးငွေများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ချေးကြသည်။ ပိုက်ဆံ မချေးချင် ချေးချင်လာအောင်လည်း နည်းပေါင်းစုံ သုံး၍ ဆွဲဆောင်ကြသည်။ အတိုးမှာလည်း သိပ်မများလှပါ။ မိမိချေးလိုသည့် ငွေပမာဏအား မိမိရသည့်လခအပေါ်မူတည် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ လခမည်မျှရသည်ကို CPF account တွင်ကြည့်ပြီး သိနိုင်သည်။ CPF ကို လခပေါ်မူတည် ဖြတ်သည်ဖြစ်ရာ CPF ဖြတ်ငွေကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် လခကို တွက်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ပြန်ဆပ်မည့်ကာလ (ဥပမာ ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ် စသည်) ကို မေးကာ ထိုကာလအတွက် အတိုး၊ ဆောင်ရွက်ခ စသည်တို့ကို တပါတည်းပေါင်းထည့်လျှက် ပြန်ဆပ်မည့်လပေါင်းနှင့် စားကာ တစ်လမည်မျှဆပ်ရမည်ကို တွက်ပေး၏။ ထိုဆပ်ရမည့် ပမာဏကို လစဉ်လဆန်းတိုင်း မိမိဘဏ်စာရင်းထဲမှ ဖြတ်သွားသည်။
(၃) အစိုးရဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၌ အီလက်ထရောနစ်စနစ် အသုံးပြုပုံ
လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရာတွင်လည်း အွန်လိုင်းလျှောက်၍ ရ၏။ Website မှာ Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) website ဖြစ်ပြီး မိမိ SingPass ဖြင့် ၀င်၍ လျှောက်ရသည်။
မှတ်ချက်။ ။ SingPass ဆိုသည်မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရသူများ (PR - Permanent Resident) သည် မိမိတို့၏ NRIC (National Registration No.) နံပါတ်ဖြင့် SingPass လျှောက်လို့ရ၏။ SingPass သုံးပြီး အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်သော အလုပ်တော်တော်များများကို လုပ်နိုင်လေသည်။ ဥပမာ - အခွန်အခများကို ကြည့်ခြင်း၊ ပေးဆောင်ခြင်း၊ ပေးထားသည့် အခွန်ပြေစာများကို download လုပ်ခြင်း၊ CPF သွင်းငွေများကို ကြည့်ခြင်း၊ ယခင်က ပေးသွင်း ထားခဲ့သည့် CPF သွင်းငွေများကို ၁၅ လစာအတွက် ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်း၊ ပေးသွင်းရန်ကျန်နေသည့် CPF ငွေများကို ပေးသွင်း ခြင်း၊ ပတ်စ်ပို့လျှောက်ခြင်း၊ ဗီဇာလျှောက်ခြင်း၊ အခြား PR, Re-entry permit, long term pass, visa စသည်တို့ လျှောက်ခြင်း၊ လိုင်စင်များလျှောက်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အလုပ်သမားများအတွက် ၀ပ်ပါမစ်လျှောက်ခြင်း စသည်။
ကုမ္ပဏီလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးသည့်အခါလည်း အွန်လိုင်းမှပင် လွယ်ကူစွာ တိုးနိုင်ပါသည်။ ပေးရမည့် အခကြေးငွေများကို လည်း ခရက်ဒစ်ကဒ် (credit card)၊ ဒဲဘစ်ကဒ် (debit card) များသုံးပြီး online payment ဖြင့်ပေးနိုင်၏။
နှစ်တစ်နှစ်ကုန်သည့်အခါ တစ်နှစ်ဝင်ငွေပေါ်မူတည်၍ လူတိုင်း အခွန်ဆောင်ကြရပါသည်။ ကုမ္ပဏီများက မိမိတို့ဝန်ထမ်းများ အတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ၀င်သည့်ဝင်ငွေကို တွက်ချက်ပေးသည်။ အခွန်ဆောင်ရန် အခွန်ရုံး (IRAS - Inland Revenue Authority Singapore) အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် မိမိ၏ SingPass ဖြင့်ဝင်ပြီး ရုံးမှတွက်ပေးထားသော ၀င်ငွေ၊ အခြားဝင်ငွေစသည်များကို ဖြော်ပပါ။ မိမိ၊ ဇနီးမယား၊ သမီးသားတို့အတွက် နှုတ်စရာရှိသည်များနှုတ်ပြီး တင်လိုက်ပါ။ ထမ်းဆောင်ရမည့် ၀င်ငွေခွန်ကို IRAS က တွက်ချက်ပေးပါလိမ့်မည်။ ၀င်ငွေခွန်ကို iBanking ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ AXS Station များတွင် ဖြစ်စေ ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
AXS Station ဆိုသည်မှာ ထမ်းဆောင်ရန်ရှိသည့် အခွန်အခများ၊ ရေမီးခ၊ တယ်လီဖုံးခ၊ လေယာဉ်လက်မှတ်ခ၊ ကျောင်းလခ အစရှိသည်များကို ပေးနိုင်သော စက်များဖြစ်၏။ စင်ကာပူတစ်ဝှမ်းတွင် AXS station စုစုပေါင်း ၉၀၀ ကျော် ရှိ၏။
AXS စက်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းရတာလည်း မခဲယဉ်းပါ။ မိမိ၏ IC No. သို့မဟုတ် ကျောင်းသားနံပါတ် စသည်ကို ရိုက်ထည့်။ ပေးရမည့် ငွေပမာဏကိုရိုက်ထည့်။ လိုအပ်လျှင် မိမိဖုံးနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ကာ ဘဏ်ကဒ်ဖြင့် ပေးလိုက်ရုံဖြစ်ပါသည်။ ငွေပေးပြီးလျှင် စက်က ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုဖြတ်ပိုင်းကို သိမ်းထားပါ။
အခွန်မည်မျှဆောင်ရမည်ကို မိမိဘာသာ တွက်ချက်နိုင်၏။ ဤသည်မှာလည်း မခဲယဉ်းပါ။ IRAS အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ အခွန်တွက်ရန် excel file (Income tax calculator) ကို download လုပ်ပါ။ ထို့နောက် ထိုဖိုင်ကိုဖွင့်ကာ မိမိဝင်ငွေ၊ အာမခံ အတွက် ပေးသွင်းငွေ၊ အခြား (အိမ်လခစသည်) ၀င်ငွေ၊ ဇနီး၊ သားသမီးဦးရေများကို ဖြည့်လိုက်လျှင် ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ငွေ ပမာဏကို တွက်ပေးပါလိမ့်မည်။
ပြည်သူများအား အခွန်ငွေကို လွယ်လင့်တကူပေးနိုင်အောင် စီစဉ်ထားခြင်း၊ မည်ကဲ့သို့အခွန်ဆောင်ရမည်၊ မည်မျှ အခွန် ဆောင်ရမည် စသည်တို့ကို ပညာပေးရှင်းလင်းထားခြင်းဖြင့် ပြည်သူများထံမှ ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်ငွေများကို အပြည့်အ၀ ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းအတွက် အခွန်မည်မျှကို မည်သို့မည်ပုံသွင်းရမည်မှန်းမသိပါက သို့မဟုတ် အခွန် ပေးဆောင်ရန် ခဲယဉ်းနေပါက အခွန်ဆောင်ရမည်မှန်း သိသည့်တိုင် မည်သူမှ ဒုက္ခခံပြီး အခွန်ဆောင်လိုမည် မဟုတ်ပါ။
အခွန်ရုံး (IRAS)၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး (ICA)၊ လုပ်သားအင်အားဝန်ကြီးဌာန (MOM) စသည့် စင်ကာပူမှ အစိုးရရုံးအားလုံး နှင့် ဆေးရုံဆေးခန်း၊ ဖုံးဆိုင်၊ ယုတ်စွအဆုံး စားသောက်ဆိုင်များမှာပင် တိုကင်စနစ် ရှိ၏။ ရုံး/ဆေးရုံဆေးခန်း ၀င်ပေါက်နား တွင် တိုကင်စက်ကို ထားပေးသည်။ မိမိလုပ်ချင်သည့် (ဥပမာ - PR လျှောက်ချင်သည်၊ ဆရာဝန်ပြချင်သည် စသည်) service အလိုက် တိုကင်ယူပါ။ ထိုအခါ စက်က သတ်မှတ်ထားသည့် ကုဒ်နံပါတ်နှင့်တကွ တိုကင်နံပါတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ - P1236, T1008 စသည်။ တိုကင်ရပြီဆိုလျှင် ချပေးထားသော ခုံတန်းလျားများပေါ်၌ သက်တောင့်သက်သာ စောင့်ဆိုင်းနေရုံ သာဖြစ်၏။ မိမိရှေ့မှ ကြော်ငြာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် မိမိတိုကင်နံပါတ်သည် ကောင်တာနံပတ်နှင့်တကွ ပေါ်လာသည့်အခါမှ ထို ကောင်တာသို့ သွားလိုက်ရုံဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ကောင်တာရှေ့တွင် လူများစုပြုံတိုးနေခြင်း၊ တန်းစီနေရခြင်းများ မရှိတော့။ လူအားလုံးမှာ ထိုင်ခုံများတွင် အသီးသီးအသကအသက ထိုင်ကာ ဖုံးပွတ်သူပွတ်၊ စာဖတ်သူဖတ်နှင့် နေကြသောကြောင့် လူပင်များသော်လည်း တစ်ရုံးလုံးမှာ ရှုပ်ရှက်ခတ်မနေဘဲ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျှက် အေးအေးဆေးဆေးပင် ဖြစ်ပါသည်။
နောက်တစ်ချက်မှာ eAppoint ယူရခြင်းဖြစ်၏။ ဥပမာ - PR လျှောက်သည်ဆိုပါစို့။ PR ကို online မှ လျှောက်လို့ရပါသည်။ သို့သော် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ လက်ခံရန်ကိုမူ ရက်ချိန်းယူရသည်။ ရက်ချိန်း ယူခြင်းကိုလည်း အင်တာနက်မှာပင် ယူလို့ရပါသည်။ ရက်ချိန်းယူမည့် ပြက္ခဒိန်ပေါ်တွင် မည်သည့်ရက်များတွင်တော့ ရက်ချိန်းပြည့်နေပြီဖြစ်၍ မရနိုင်တော့။ မည်သည့်ရက်များက ရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေ့ရက်၊ မည်သည့်အချိန် များတွင် ရနိုင်သည် စသဖြင့် ဖော်ပြထား၏။ မိမိအဆင်ပြေမည့်နေ့နှင့် အချိန်ကို ရွေးလိုက်ပါ။
ချိန်းထားသည့်ရက်နှင့်အချိန်တွင် ၁၅ မိနစ်လောက်စောရောက်အောင် ရုံးသို့သွားပါ။ ထို့နောက် ရုံးရှေ့ရှိ တိုကင်ယူသည့်စက် တွင် ရက်ချိန်းပေးထားသည့်စာရွက်မှ ကွန်ပြူတာဘားကုဒ်ကို scan လုပ်လိုက်ပါ။ တိုကင်ထွက်လာပါလိမ့်မည်။ တိုကင်ပေါ်တွင် ကောင်တာနံပါတ်ကိုပါ ရေးပေးထားသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကောင်တာနားတွင် ထိုင်စောင့်နေပါ။ မိမိနံပါတ်ပေါ် လာလျှင် သွားလိုက်ပါ။ အလွန်လွယ်ပါသည်။
Long term pass ထုတ်ခြင်း၊ Student Pass ထုတ်ခြင်း စသော ကိစ္စတော်တော်များများကို eAppoint နှင့်သာ သွားရသဖြင့် စောင့်ရချိန် နည်းသည်။ ကိစ္စမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးသဖြင့် ရုံးတွင် လူရှုပ်သက်သာသည်။
အစိုးရဌာနများသို့ပေးရသော အခကြေးငွေများကို ငွေသားဖြင့် လက်မခံပါ။ NETS (Network for Electronic Transfer (Singapore), Cheque စသဖြင့် ပေးရသည်။ ငွေသားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ မိမိဘဏ်စာရင်းထဲမှနေ၍ အစိုးရဘဏ်စာရင်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲထည့်ခြင်းကို NETS ဟု ခေါ်သည်။ NETS ဖြင့်ပေးရန် မိမိဘဏ်ကဒ်ကို သုံးရ၏။ အစိုးရဌာနများသာမက စင်ကာပူတွင် နေရာအားလုံးလိုလို၌ NETS ဖြင့် ပေး၍ရပါသည်။
အချို့စင်ကာပူအစိုးရဌာနများက လိုင်စင်လျှောက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စများအတွက် စာရွက်များဖြင့် တင်ခြင်းကို လက်မခံပါ။ စာရွက်စာတမ်းများကို scan ဆွဲ၍ ၎င်းတို့ဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် သူတို့ပေးထားသည့်နေရာ၌ attach လုပ် တင်ရပါသည်။ ဓာတ်ပုံများလည်း အလားတူပင် ဖြစ်၏။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မညီလျှင် အွန်လိုင်းတင်ရာ၌ တင်မရဘဲ အခက်အခဲနှင့် ကြုံရတတ်ပါသည်။ ဥပမာ - ဓာတ်ပုံအရွယ်အစား (pixcel ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။)၊ ဖိုင်ဆိုဒ် စသည်။
ထိုကဲ့သို့ မိမိရုံးခန်းမှနေ၍ ထိုင်ရာမထ လုပ်နိုင်သောကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာသည်၊ လူပင်ပန်း၊ စိတ်ပင်ပန်း သက်သာ သည်။ မြန်သည်။ အမှားအယွင်းနည်းသည်။ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း နည်းသွားသည်။ မိမိတင်လိုက်သည်များကို အချိန်မရွေး ကြည့်လို့ရသည်။
Posted by အေးငြိမ်း at 1:07 AM